I-China Imikhiqizo ehlobene nezilwane Abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla & Thenga imikhiqizo ehlobene nezaphulelo - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Imikhiqizo ehlobene nezilwane ezifuywayo
I-velvet, i-cashmere, i-velvet yamakhorali nezinye izinto ezigezekayo, zikhululekile futhi zifudumele.Kukhona futhi umbala okhanyayo opinki / onsundu / ompunga / beige / onsomi / onsundu kumakhasimende ongakhetha kuwo. phatha, kulula ukuphuma.
Ijakhethi yempilo yenja
Uma kuqhathaniswa ne-foam yendabuko, isiguqo somoya sandisa ukunethezeka. Ukuthokomala kwesigodlo somoya sevolumu efanayo kukhulu kunokwesikhwama segwebu. Ivesti yempilo yesikhukhi esifuthwayo yonga imali ezokuthutha kanye nezindleko zokugcina.Ibhantshi lokuphila elikhanyayo elikhanyayo! Kwenzelwe ngokucophelela izinja ezingakaze zithinte amanzi.
Okokusebenza kufaka phakathi inayiloni i-1000D, i-microfiber, inetha leShuangyi, amajezi nezinye izinto ezidumile ngaphandle kokubiza.
Inja yeTactical Vest
Ikhwalithi ephezulu yenayiloni, eqinile, egezekayo.Ihhanisi lezinja kulula ukushelela futhi ulivimbe.I-leash eguquguqukayo yenza i-harness ilungele inja yakho.Lokhu kungukukhetha okuhle kwenja yakho ukunyuka, ukukhempa, ukuhamba nokudlala imidlalo yamaqhinga.
Qonda izinzuzo ezinhlanu zomkhiqizo: 1. Ukukhethwa kwento yenayiloni, ephephile futhi engeyona enobuthi, eqinile futhi eqinile. ukugoqa kwepulasitiki, ukuvimbela ngempumelelo ukuwa okuxekethile.5 Idizayini ephezulu ekhombisa ukwakheka, ukuhamba ebusuku kuphephile.
Abathandi bezilwane ezifuywayo, lapho uthenga i-catnip, wake wacabanga yini ukuxhumana nathi ukushintsha isidleke sesilwane sakho, izingubo zezilwane, noma i-leash namanye amathoyizi.